Akụkọ - Ihe kpatara ewu ewu nke soda lime karama iko
Ihe kpatara ewu ewu nke soda lime karama iko
Iko karama bụ arịa maka ọgwụ, nri, na ngwaahịa nlekọta ahụike. N'ime ha, a na-eji ezigbo akụrụngwa soda lime karama mee ka ọ dị ọcha na ogbako ọcha nke 100,000. Karama-wayo karama na-adị mfe ịme, nwere ụdị nwere onwe ya ma na-agbanwe agbanwe, yana ọtụtụ ụdị karama. Gịnị kpatara karama lime karama ji ewu ewu? A na-eji karama soda-lime karama eme mmiri soda dị ka akụrụngwa, nke nwere ezigbo nkwụsi ike kemịkalụ, nguzogide acid, nguzogide alkali, na nguzogide corrosion. Enwere ike iji ya maka igbe nkwakọ ngwaahịa ọgwụ dị iche iche. The karama soda wayo karama nwere anụ n'ibu Njirimara. O nwere ike iguzogide nrụgide na kalama ahụ n'oge njem na ikike mpụga n'oge njem mpụga. O meela nnukwu oganihu na mgbochi-shatter. Nkọwa dị iche iche nwere ikike dị iche iche, nke nwere ike izute mkpa ndị ahịa maka ikike dị iche iche nke ngwaahịa. A na-eji ikike dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche, yana nhazi nke mkpuchi dịkwa iche iche. Enwere ike ịkwadebe ya na mkpuchi aluminom, ihe mkpuchi aluminom anodized, ihe mkpuchi plastik nke agba dị iche iche, butyl gasket, silicone gasket, peket, wdg. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ dịka ike nke ngwaahịa ha chọrọ, ma nwekwara ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ. The àgwà bụ nditịm dị na ahịa chọrọ, na anyị ga-eme ike anyị niile iji na-ezute ahịa chọrọ.
E jiriwo nkwakọ karama Coca-Cola mee ihe karịrị afọ 100. Nke a abụghị naanị Coca-Cola, ọ bụkwa oge kwesịrị ncheta na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe taa, a na-ebute ngwa ahịa ngwa ngwa. Fọdụ ngwugwu ọhụrụ ejiriwo ngwugwu ndị ọzọ dochie ha tupu ha amata anya mmadụ. E jirila ngwugwu karama mee ihe ruo ogologo oge. Ihe karịrị afọ 100, nke a bara nnukwu uru. N'ezie, site na nyocha nke data dị iche iche anyị, nwelite mmelite nke nkwakọba karama iko mgbe ejiri ya were nwayọ nwayọ karịa ngwugwu ndị ọzọ dịka plastik na katọn. Nke a bụ isi n'ihi na ọnụahịa mmepụta nke nkwakọ ngwaahịa karama dịtụ elu, na ngbanwe nke akụrụngwa mmepụta ga-adị elu n'akụkụ niile. Akụkụ ọzọ bụ na a na-ejikarị ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa karama eme ihe na ngwaahịa ndị dị elu, na ndị na-emepụta karama iko nwere ihe siri ike maka nkwụsi ike nke nkwakọ ngwaahịa. Mana iji nweta nkwakọ ngwaahịa dị ka karama Coca-Cola, ọ dị mkpa ka a rụọ ọtụtụ ihe. Karịsịa na mbido mbido ngwugwu nkwakọ ngwaahịa maka karama iko, a ga-arụkwu ọrụ, yana nyocha ahịa dị mkpa. , ma maka usoro mmepụta, ọ ga-ewepụ ọnụ ahịa nke nnọchi, ma belata mmefu na akụkụ dị iche iche nke ọzụzụ ọrụ ndị ọrụ. . Yabụ, ịkpụzi nkwakọ ngwaahịa karama ga-aga nke ọma nwere ike ịba uru na enweghị mmerụ maka ndị nrụpụta.
Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Iko karama na ịgba nfuli, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass kalama na mgbapụta Dispenser,